Iddoo tarjaawwan deebinee agarsiisuu barbaanne filuu dandeenyutti baafata xiqqaa waamna. Tarjaa tokko qofa agarsiisudhaaf, maqaa tarjaa cuqaasi. Tarjaawwan 16 jalqaba dhokatan qofa arguu dandeessa. Yoo tarjaawwan baay'en dhokatan jiraatan, ajajaDabali jedhu fili qaaqa Tarjaa Mul'isi.
Tarjaa hunda yoo mul'isuu barbaadde Hunda Cuqaasaa.
Gabateen cunqoo gabatee too'annoowwanii qofa too'ata
Too`annoolee galmee kee keessa deemuuf gabatee furtuu qofa gargaarami, akaakuu too`annoolee biraaf adda addummaa ni argata: caancali furtuu qareegara too`annoo itti aanuutti siiqsuu hin danda`u, garuu gara tarjaa itti aanuu too`annoo gabatee keessatti ni siiqsa. Too`annoo itti aanu siiqsuuf ajajaCtrl+Tab dhiibi, ykn gara too`annoo duraatti siiqsuuf Shift+AjajaCtrl+Tab dhiibi.
Gabateen cunqoo gabatee addaa galchuuf too'annoowwanii qofa too'ata
Unkaan galmeeHaalata wixineeqabaachuu qaba.
Galmee filuuf AjajaCtrl+F6 dhiibi.
Too'annoo jalqabaa filuuf TOO"ANNOO+F4 gaddhiibi. Yoo too'annoon gabatee too'annoo jalqabaa ta'uu baate,hanga filamutti Cancala gaddhiibi.
Haalata gulaalu galchuuf furtuu GALCHAA gaddhiibi. Qabannoon baay'inaan handaara too'annoorraa
Haalata Gulaallii keessatti,Too'annoo+F10 gaddhiibun haalata gulaallii baafata halqara banuu dandeessa
Yoo tarjaawwan gulaaluu barbaadde, Haalata gulaallii tarjaa galchuuf Shift+Space dhiibi. Amma tartiiba tarjaawwanii furtuulee +Arrow AjajaCtrl wajjiin deebitee qindeessuu dandeessa. Furtuu balleessituun tarjaa ammee balleessiti.
Haalata gulaaluf dhiisuf furtuu DHIISI gaddhiibi.